Shiinaha Mashiinka Maya: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y83 Taxanaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Briquetting Qalabka Warshad Dib-u-warshadaynta Birta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midow Sare
Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y83 Taxanaha Haydarooliga Birta Chip Briquetting Mashiinka Mashiinka ee Dib-u-warshadaynta Birta
Y83 taxane mashiinka mashiinka jajabka ah ee birta ah ayaa badanaa loo isticmaalaa qashinka birta ah, qashinka birta.
Maqaarka naxaasta iyo qashinka aluminium iyo kharashyada kale ee cadaadiska cufnaanta sare leh
si loo fududeeyo dib-u-warshadaynta iyo dhalaalida, gaar ahaan ka dib markii la xakameeyay birta kale ee birta lagu tuuro.
Model Y83 Taxanaha
Cadaadiska Haydarooliga 180-3000 Tan
Nooca Horizontal or type toosan
Briquette cabirka Caado
Howlgalka Xakamaynta PLC
Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah ayaa leh faa'iidooyin wanaagsan warshadaha dib-u-warshadaynta birta. Maalmahan, yaraanta ilaha dhaqaale ee la heli karo waa dhibaato dal kasta soo foodsaarta. Macno malahan wadamada soo koraya ama horumaray, sida loo sameeyo dib u warshadeynta ugu fiican had iyo jeer waa mowduuc kulul. Sidaa darteed waxaan u qaabeyneynaa nooca toosan ama nooca jiifka ah ee mashiinka saxaafadda qashinka birta ah ee loogu talagalay macaamiishayada si ay ula macaamilaan birtooda duugga ah si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisheena.
Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah ayaa inta badan loo adeegsadaa in lagu riixo dhammaan noocyada qashinka birta ah (qashinka birta ah, qashinka naxaasta ah, qashinka aluminiumka, iwm.) Baloogyada iyada oo loo marayo caaryada, taas oo ku habboon gaadiidka iyo daaweynta qashinka birta ah. Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah waa qalabka ugu fiican ee warshadda naxaasta iyo birta, biraha aan birta ahayn.
●Nidaamka waxaa loogu talagalay qalab pre-daadinta si looga takhaluso shoogga Haydarooliga.
Equipment Qalab casri ah oo horumarsan, si loo hubiyo baahiyaha wax soo saar ee isticmaalaha.
Part Qaybta korantada waxay aqbashaa nidaamka kontoroolka otomaatiga ee PLC ee la soo dejiyo.
Body Jirka ugu weyn wuxuu qaataa qaab dhismeedka guud ee birta, xoogga sare, xasiloonida wanaagsan, uma baahna inuu rakibo boolal lagu xiro.
Machine Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah wuxuu qaataa gudbinta haydarooliga, xirfadle sare oo balaaran oo dhan, kanaalka qulqulka, si markaa cadaadiska luminta nidaamku u yar yahay, looga takhaluso faa'iido darrooyinka daadashada.
Pt Qaado waalka kaydadka, qalabka korontada ku shaqeeya ee korantada iyo habeynta saliidda, si nidaamka haydyuhu u fiicnaado, xitaa haddii ay dhacdo culeys muddo dheer soconaya, nidaamku uma muuqan doono xakameyn la'aan.
Li Macaamiisha ayaa u habeyn kara qeexitaannada baakadaha iyo cabirka iyadoo loo eegayo baahidooda.
Faahfaahinta Mashiinka Saxaafadda Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka：
Xakamaynta otomaatiga ah
Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah ayaa lagu qalabeeyaa muujinta qoraalka la isku hagaajin karo, isku xigxiga ficilka iyo waqti kasta oo ficil ah waxaa si buuxda gacanta ugu haya nidaamka PLC, waxaana lagu hagaajin karaa wakhti kasta hawl wadeenka, ku habboon, fudud oo fudud oo la fahmi karo.
Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah ayaa lagu qalabeeyaa, wuxuu ogaan karaa quudinta otomaatiga ah, kordhinta awoodda maalinlaha ah iyo keydinta shaqaalaha.
1.Sulinder ku riix
Mashiinka ugu weyn ee Haydarooliga ayaa baabi'iya shubka birta wuxuuna baabi'iyaa halista nabadgelyo ee iman kara. Hubso nolosha iyo amniga qalabka. Iswaafajinaysa qaab dhismeedka iyo caaryada, kor u riixaya by design xirfad leh awoodda processing sare waa dammaanad dhadhanka fiican ee qalabka. Feedhka caaryada iyo saxaafada waxay ku qalabeysan yihiin bir xoog badan oo birta u adkeysata oo si dhaqso leh loo beddeli karo. Dhamaadka hore ee feerka LINDUR feed waxaa ku qalabeysan giraan saxaafadeed oo dhar-adkeysi u adkeynaya kala furfurid iyo rakibid fudud, si nolosheeda adeegga loo dheereeyo. Qaybaha ay khusayso ayaa si gaar ah loo adkeeyay ama loo been abuuray meeshii looga baahdo.
Mashiinka mashiinka wax lagu qoro ee birta ah ee birta ah wuxuu ka kooban yahay matoor, mashiinka korontada ku shaqeeya, qalabka ilaalinta bamka, qalabka xakamaynta mihnadlaha iyo nidaamka biibiile ee ku xiran saxaafadda. Naqshad macquul ah, tayo deggan. Ku qalabaysan nidaamka qaboojinta, si looga fogaado qalabku uma shaqeyn karo si joogto ah sababtoo ah kuleylka heerkulka saliidda.
Soosaarid （Ton / saacad）
0 110 x （50 ~ 70）
Mashiinkayaga qashin-qubka birta ah ee birta ah ayaa siiya qaybo mashiin caan ah oo caan ah, waxaan la shaqeyneynay shirkado badan oo caan ah oo caan ah, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii la mid ah in ka badan 10 sano
Mashiinkayaga qashin-qubka birta ah ee birta ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha soo socda:
Mashiinkayaga qashin-qubka birta ah ee birta ah wuxuu ku habboon yahay shirkadaha waaweyn ee qashinka,
Components Qaybaha waaweyn ee tamarta dabaysha macdanta.
Manufacturers Soosaarayaasha alaabada Copper iyo aluminium.
Mashiinka mashiinka qashinka birta ah ee birta ah ee makiinada wax lagu qoro mabaadi'da shaqada ayaa ah iyada oo loo marayo silsiladda quudinta silsiladda quudinta ee ka soo baxa harada si loogu daro qalabka mashiinka ah, ka dhig cadaadiska sare ee hoos u dhinta walxaha ayaa lagu riixayaa nidaamka dejinta oo ku soo noqo 1 ~ 2 ilbiriqsiyo, dejinta, riixitaanka saliida saliida. meel, hoos dhinta sare u dhiman doonaa set of birta saqafka extrusion, riixaya horay dhululubada ah waxay bilaabi doontaa saabka, wareegga wareejinta silsiladda cadaadiska briquetting shaqada xigta. Shaqo-socodka: silsiladda quudinta ee horumarsan iyo silsiladda qalabka cadaadiska (silsiladda sayidka) hoos u dhigista foojignaanta, alaabada cadaadiska soo celinaysa 1 ~ 2 ilbidhiqsi - riixitaanka dhululubo saliid ah (silsilad cabbitaan sigaar ah) ayaa la filayaa inay soo laabato - silsiladda cadaadiska hoos u riix galka cadaadiska galka la bilaabay culeyska heerka cadaadiska ee - silsiladda quudinta walxaha ayaa ku soo laabtay, wareegga shaqada ee xigta.
Waxaan u isticmaali doonaa baakadaha filimka la duubay iyo baakadaha alwaaxda ah si aan u ilaalino mashiinka wax lagu qoro ee birta qashinka birta ah.
Daawo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaraashka ee Dib-u-warshadaynta Birta ee Waxqabadka!
Hore: Qaab No: Soosaarida Shiinaha Q91Y Taxanaha Haydarooliga qashinka birta mashiinka xiirista culus
Xiga: Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y81 Taxanaha Kaydinta Qalabka Mashiinka Aluminium Baler Aluminium ee Qalabka Dib-u-warshadaynta Birta
Mashiinka Saxaafadda ee Briquetting
Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Mashiinka Birta Briquette, Baler Xadhig Baler, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Sheet Birta Baler,